बलिउड – NepalajaMedia
वलिवूड अभिनेत्री काजोलले किन कहिल्यै गोविन्दसँग काम गरिनन् ? अभिनेत्रीले खोलिन् र,हस्य ।
बलिउडको चर्चित अभिनेत्री काजोलले भारतिय मिडिया बलिउड लाइफका पाठकहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिइन किन उनले कहिल्यै इन्डस्ट्रीको ‘हीरो नम्बर १’ गोविन्दसँग काम गरिनन् ? काजोलले भनिन, ‘हामीले जंंंगलि नामको फिल्म सुरु गरेका थियौं, जुन निर्देशक राहुल रावलेले बनाउनु पर्ने थियो । हामीले यस फिल्मको लागि फोटोशूट पनि गरेका थियौं तर यो सुरु हुनु अघि फिल्म रोकियो । हामीले फोटोशूट बाहेक फिल्मका लागि कुनै शुटिंंग गरेका थिएनौं, तर म भन्न चाहन्छु गोविन्द (गोविन्द) एक अ,द्भुत अभिनेता हो । मैले सँधै भनेको छु कि मानिसहरूलाई हसाउन धेरै गाह्रो हुन्छ र गोविन्दले ती कार्यहरू राम्रो गर्दछन । काजोललाई भविष्यमा गोविन्दसँग काम गर्ने भनेर सोधिंदा उनले भनिन्, ‘मलाई भविष्यको बारेमा थाहा छैन तर गोविन्द अद्भुत अभिनेता हुन्। यदि राम्रो कुरा आयो भने हामी अवश्य काम गर्नेछौं ।’ बलिउड अभिनेत्री काजोल नेटफ्लिक्समा रिलीज भएको उ
साउथ फिल्म इण्डस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी एकपटक फेरि आफ्नो बिवाहको खबरको कारण चर्चामा छिन्। मिडिया हाउसले अनुष्का शेट्टीको बारेमा खबर प्रकाशित गर्‍यो कि अभिनेत्रीले दुबईमा आधारित एक ठुलो ब्यापारीसङ्ग लगन कस्दै छिन् । प्रतिवेदनमा व्यापारीको नाम उल्लेख गरिएको छैन तर यो निश्चित छ कि यो व्यापारी अनुष्का शेट्टी भन्दा उमेरमा साना छन। विवाह सम्बन्धी यी अफवाहहरूमा अनुष्का शर्माको बारेमा कुनै आधिकारिक बयान भने आएको छैन। अनुष्का शेट्टीका फ्यानहरूले उनलाई लगातार यी अफवाहहरूको बारेमा जावफ दिन आग्रह गरिरहेका छन्। यो पहिलो पटक होइन अनुष्का शेट्टीको विवाहको खबरले जनतामा हल्ला मचाको। यसभन्दा पहिले पनि अनुष्का शेट्टीको विवाहको खबर धेरै पटक आइसकेको छ। एक पटक अनुष्का शेट्टी र प्रभासको बारेमा विवाहको खबर आयो जुन निकै चर्चाको कारण बन्यो। यस पछि, अनुष्का र प्रभास दुवैले अघि आए र विवाहको खबर
एजेन्सी । बलिउड गायिका नेहा कक्कर र कलाकार हिमांश कोहली लामो समससम्म प्रेम सम्बन्धमा थिए । नेहा रोहनप्रीतसँग विवाह गर्नु भन्दा केही वर्ष पहिला हिमांशसँगको प्रेममा रमाउने गरेकी थिइन् । हिमांशले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै पुगेर नेहालाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरुले केही म्युजिक भिडियोमा पनि संगै काम गरे । दुवैजना प्रेम सम्बन्धको बारेमा निकै भावुक थिए तर २०१८ मा उनीहरुको ब्रेकअप भयो । ब्रेकअपको असर नेहाले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदर्शन गदै आएकी थिइन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफुलाई सम्हाल्न सकिन् । उनले सहानुभुती बटुलीरहँदा हिमांशले भने कतै पनि आफु दुःखी भएको देखाएनन् । हाल दुवैको जीवन आ–आफ्नै किसिमले चलेको छ । नेहाले एक वर्ष अघि विवाह गरेकी छन् । हिमांश पनि आफ्नो ब्यक्तिगत जिवनमा निकै अघि बढी सकेका छन् । लामो समय पछि नेहासंगको ब्रेकअपको बारेमा खुलेर कुरा गरेका छन् । उन
गायीका नेहा कक्कड़को विवाहको चर्चा अझै सेलाएको छैन । निकै चर्चीत भएको विवाहको केही तस्बिर भने सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भएका छन् । उनले विवाहमा लगाएको लेहेंगा अर्की नायीका अनुष्का शर्मा र प्रियंका चोपडाले विवाहमा लगाएको ड्रेस जस्तै छ भनेर ट्रोल भएको हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अनुष्का र नेहाको विवाहको तस्बिर राखेर ट्रोल बनाइरहेका छन् । नेहाको परिवार र नजिकका साथीहरू यस विवाहमा उपस्थित भएका थिए। विवाह भिडियो र फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि ट्रोल बन्न लागेको हो ।नेहा कक्कड़ले सब्यसाची र फाल्गुनी शेनले डिजाइन गरेको लेहंगा लगाएकी थिइन् । नेहा सो ड्रेसमा दुलही बन्दा निकै सुन्दर देखिएकी छन् । तर गायीकाले आउटफिट (ड्रेस)का लागि ट्रोल सामना गर्नुपरेको छ । वास्तवमा नेहा कक्करको लुक अनुष्का शर्मा र प्रियंका चोपडाको दुलही लुक जस्तै थियो। नेहाका दुलही पोशाकहरू रीमेक को रूपमा सोशल मी
Posted in बलिउड, भिडियो
भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व राष्ट्रिय कप्तान भिक्षु बनेका छन् । उनी ध्यानमग्न अवस्थामा कपाल समेत खौरिएर एक जंगलमा भेटिएको तस्वीर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भै रहेको छ । पछिल्लो समय महेन्द्र सिंह धोनी आइपीएलको १४ औं सिजनको तयारीमा जुटेको समाचारहरु बाहिरिएका थिए । यसैबीच सोसल मिडियामा धोनीको एउटा तस्बिरले धेरैको ध्यान आकृष्ट पारेको छ । उक्त तस्बिर कुनै विज्ञापनको सुटिङबाट खिचिएको जस्तो भान हुन्छ । धोनीले टाउको खौरिएका छन् भने उनले बौद्ध भिक्षुजस्तो कपडा लगाएर कुनै जङ्गलमा देखिएका छन् । स्टार स्पोर्टस्ले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलबाट योसँग सम्बन्धित ९ सेकेन्डको प्रोमो पनि सेयर गरेको छ । धोनीले यो प्रोमोमा भनिरहेका छन्, ‘यस्तो अवतारको कारण के हो? चाँडै नै थाहा हुनेछ ।’ सन्सारभरीका धोनीका प्रशंशकहरु उक्त कारण थाहा पाउन आतुर छन् । Mantra… avatar… we are as ? as you are right
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री करिना कपूर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ट्रोलको शिकार बनेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा फोटो सार्वजनिक गरेपछि करिना कपूर ट्रोलको सिकार भएकी हुन्। पारिवारिक भ्रमणको लागि निस्किएकी ४० वर्षकी करिनाको यो फोटो फ्यान क्लबमा शेयर भएको थियो। त्यसपछि उनलार्ई ‘बुढी देखिएको’ भनेर ट्रोल बनाइएको छ। घामको आडमा बसेर लिइएको यो तस्बिर एकदमै क्लोज अप छ। यो तस्बिरमा अब करिनालाई ‘बुढेशकाल लाग्न लाग्यो’ भनेर कमेन्ट गरिएको छ। धेरैले ‘वोल्ड इज गोल्ड’ भनेका छन्। यस्तै तस्बिरमा उनी ‘पाको र जीवन्त नदेखिएको’ भनिएको छ। उनलाई ‘आन्टी’ भनेर पनि कमेन्ट गरिएको छ। करिना कपूरले शेफ अलि खानसँग विवाह गरेकी हुन् र उनको ५ वर्षको छोरा ‘तैमूर’ छन्। हालै पनि उनि दोस्रो सन्तानको पर्खाइमा रहेकी छिन् । उनलाई केही फ्यानहरुले राम्रो खानेकुरा खान पनि सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौं। बलिउड सुपरस्टार सलमान खान हरेकको दिलमा राज गर्ने व्यक्ति हुन् । उनको फ्यानको उनीप्रतिको क्रेज यस्तो छ कि सलमानको जुनसुकै फिल्म रिलिज भएपनि सुपरहिट भइहाल्छ । बलिउडमा उनको सफलताको आजपनि ग्यारेन्टी जस्तै नै छ । उनी अभिनीत पछिल्लो फिल्म ‘भारत’ हो ।सलमानलाई वर्षौदेखि प्रशंसकहरुले एउटा प्रश्न पटक-पटक गर्ने गरेका छन्- ‘कहिले बिहे गर्ने ?’ उनको बिहेको विषयलाई लिएर अनेक अन्दाज लगाइएको पाइन्छ । कहिले सलमान कैटरीनासँग, कहिले यूलियासँग बिहे गर्दै भन्ने हल्ला फैलिरहेको छ । तर, वास्तवमा नै उनले कहिले बिहे गर्छन् कसैलाई थाहा छैन ।सलमानको पारिवारिक सुत्रको अनुसार, सलीम खान (सलमानका पिता) ले भनेका छन्, ‘सलमानलाई बिहेको द’बाब नदिँदा नै राम्रो हुन्छ किनकी उसले जीन्दगीभर एक्लै रहने फैसला गरिसकेको छ ।’ऐश्वर्यासँग ब्रेकअप भएपछि सलमानको माया–प्रेममा विश्वास लाग्न छाडेको बताइन्छ । यसकारण उनले
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सोनु सुद लकडाउनको समयमा बाटोमा अलपत्र परेकाहरुलाई आफ्नै खर्चमा उनीहरुको गन्तब्य सम्म लैजान ब्यस्त थिए । उनले त्यसरी हजारौं नागरिकलाई सहयोग गरे । अलपत्रलाई सम्बन्धीत ठाउँमा लैजाने मात्र होइन खान नपाएकाहरुको पेट पनि भरे । उनको यस्तो कामको सबैतिर चर्चा भयो । अहिले उनले सडकमा अलपत्र महिला र बच्चाको उद्दार गरेका छन् । उनले ति महिलाका लागि घर समेत बनाउने घोषणा गरेका छन् । पछिल्लो समय लकडाउनमा प्रवासी मजदुरका लागि यातायातदेखि खान बस्नसम्म सहयोग गर्दै आएका सोनुले पटनामा अलपत्र परिवारलाई घर दिने निर्णय गरेसंगै उनको प्रशंसा भएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा अंकित राजगढियाले सोनुलाई मेन्सन गरेर घरबेटीले कोठाबाट निकालेपछि सडकमा बच्चासहित बसिरहेकी महिलाको तस्विर शेयर गरेका थिए। उक्त ट्वीटमा प्रतिक्रिया दिँदै सोनुले यो परिवारले घर पाउने उल्लेख गरेका छन। अंकिले लेखेका छ
बलिउड अभिनेता आमिर खान र उनकी पहिलो पत्नी रिनाको छोरी इरा खानले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एक भिडियो सेयर गरेकी छिन् । जसमा आफुमाथि १४ वर्षको उमेरमा शा’ रीरिक शो ‘षण भएको बताएकी छिन् । इराले भनेकी छिन्, ‘जब म १४ वर्षको थिए त्यत्तिबेला ती व्यक्तिले के गरेको आफुलाई थाहा थिएन् ।’ उनले भनेकी छिन्, एक वर्षसम्म त उनलाई सम्झनै मात्र लाग्यो । १ वर्षपछि मात्र उनले माता पितालाइृ भनिन् । भिडियोमार्फत यी सब आफैले कसरी हुन दिए भनेर पछि आफैसँग रि’स उ’ठेको पनि इराले बताइन् । यस भिडियोमा इराले उनका जीवनमा भएका राम्रा र न’राम्रा घ’टनाहरु बताएकी छिन् । उनले कुराको सिलसिलामा कुनै पल रोएको र कुन कुराले आफु धेरै म’जबुद भएको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । उनले माता पिताको स’म्बन्ध विच्देछबारे पनि कुरा गरेकी छिन् । केही दिन अगाडी इराले आफु डि’ प्रेश’नमा गएको आफै खुलाशा गरेकी थिइन्, ४ वर्ष अगाडी डि ‘प्रेशन’मा